PressReader - The Globe and Mail (Atlantic Edition): 2017-11-15 - Zimbabwe streets quiet amid coup re­ports
Zimbabwe streets quiet amid coup re­ports
The Globe and Mail (Atlantic Edition) - 2017-11-15 - NEWS - JEF­FREY MOYO HARARE
Al­lies of Zimbabwe’s Pres­i­dent Robert Mu­gabe vowed Tues­day that his gov­ern­ment and the gov­ern­ing party would not be in­tim­i­dated by the coun­try’s mil­i­tary lead­ers af­ter they threat­ened to in­ter­vene in a heated po­lit­i­cal feud.
The ques­tion of who will suc­ceed Mr. Mu­gabe, 93, the coun­try’s leader since 1980, has long haunted Zimbabwe and its po­lit­i­cal class.
In a re­mark­able act of de­fi­ance, the com­man­der of the Zimbabwe De­fense Forces, Gen­eral Con­stan­tine Chi­wenga, warned Mon­day that “when it comes to mat­ters of pro­tect­ing our rev­o­lu­tion, the mil­i­tary will not hes­i­tate to step in.”
Mr. Moyo, who is also the party’s na­tional sec­re­tary for in­for­ma­tion and pub­lic­ity, said the state­ment by Gen. Chi­wenga “sug­gests trea­son­able con­duct on his part as this was meant to in­cite in­sur­rec­tion and vi­o­lent chal­lenge to con­sti­tu­tional or­der.”
“Pur­port­ing to speak on be­half of the Zimbabwe De­fense Forces,” he said, “was not only sur­pris­ing but was an out­ra­geous vi­ti­a­tion of pro­fes­sional sol­dier­ship and his wartime record as high-rank­ing free­dom fighter, en­trusted with com­mand re­spon­si­bil­i­ties in a free and demo­cratic Zimbabwe.”
Mr. Moyo’s state­ment, broad­cast dur­ing the evening news hour on state tele­vi­sion, came hours af­ter a leader of the party’s Youth League made sim­i­lar re­marks at ZANU-PF head­quar­ters in Harare.
“Gen­eral Chi­wenga and all those in the se­cu­rity sec­tor who wish to en­gage in pol­i­tics are free to throw their hats in the ring and not hide be­hind the bar­rel of the gun,” said Mr. Chipanga, who be­came a favourite of Zimbabwe’s first fam­ily af­ter he helped or­ga­nize a march last year in sup­port of Mr. Mu­gabe’s lead­er­ship.